Wararka - Lix faaiido oo ugu weyn cabitaanka shaaha oo aadan ogeyn
Waa caadi in shaaha la cabbo nolosha. Dad badan ayaa u tixgeliya shaaha hiwaayadooda, gaar ahaan dadka waayeelka ah waxay jecel yihiin cabbitaanka shaaha. Qof walba waa ogyahay, sidaa darteed waxaan cabnaa shaah maalin kasta si aan u ogaano waxa shaah yahay. Ma fiicantahay? Haddaba miyaanay habboonayn in dadku cabbaan shaaha? Tifaftiraha soo socda ayaa si faahfaahsan u sharxi doona, waxaan rajeynayaa in dadka jecel shaaha ay garan karaan dhibaatooyinkan.
Waa maxay faa'iidooyinka cabitaanka shaaha
1. Hagaajinta adkaysiga muruqa
Cabitaanka shaaha wuxuu hagaajin karaa adkaysiga muruqa. Sababtoo ah waxaa sidoo kale ku jira shay antioxidant ah oo la yiraahdo catechin, kaas oo kor u qaadi kara awoodda jirka ee gubista dufanka, hagaajinta adkaysiga muruqa, caawinta la -dagaallanka daalka, iyo kordhinta waqtiga jimicsiga jirka. Cabitaanka shaaha cagaaran badiyaa wuxuu leeyahay saamaynta ugu weyn.
2. U adkaysiga shucaaca ultraviolet
Polyphenols-ka shaaha ayaa ah walxo biyo-milmi kara. Ku maydh wejigaaga biyo shaah ah ayaa nadiifin kara wejiga dufanka leh, ciriiri kara daloolada, jeermiska, jeermiska, iyo iska caabinta gabowga maqaarka. Waxa kale oo ay caawineysaa in la yareeyo waxyeelada shucaaca ultraviolet ee qorraxda maqaarka. Waa dabiici dabiici ah “kareemka qorraxda”. ".
3. Joogso qaab ahaan
Doodda ku saabsan shaaha ee "Materia Medica Supplements" ee Tang Dynasty waxay xustay in "cunidda dheer ay kaa dhigto caato", iyo cilmi baaris casri ah oo saynis ayaa taas xaqiijisay. Caffeine -ka shaaha ku jira ayaa kor u qaadi kara dheecaanka casiirka caloosha, wuxuu caawiyaa dheefshiidka, wuxuuna kor u qaadaa awoodda jirka ee dufanka. Daraasado shisheeye ayaa sidoo kale muujiyey in cabbitaanka shaaha ee joogtada ahi uu yarayn karo wareegga dhexda iyo hoos -u -dhiska jirka (BMI), taas oo gacan ka geysanaysa ka -hortagga sonkorowga iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
4. Iska ilaali shucaaca
Daraasado shisheeye ayaa muujiyey in polyphenols shaaha iyo oksaydhkoodu ay nuugi karaan qaar ka mid ah walxaha shucaaca leh, ka ilaaliyaan unugyada waxyeelada shucaaca, sidoo kale waxay waxtar u leeyihiin hagaajinta unugyada burburay. Daraasado caafimaad ayaa muujiyey in soo -saaridda shaaha ay daaweyn karto jirro shucaac khafiif ah oo ay keenaan bukaanka burooyinka inta lagu jiro daaweynta shucaaca, hoos u dhigidda unugyada dhiigga iyo unugyada dhiigga cad ee shucaaca keena ayaa aad waxtar u leh.
5. Hagaajinta xusuusta
Cabbitaanka shaaha ayaa saameyn gaar ah ku leh hagaajinta xusuusta. Daraasaduhu waxay muujiyeen in polyphenols shaaha ee shaaha ku jira ay hagaajin karaan maskaxda, taas oo kordhineysa xusuusta iyo hagaajinta hufnaanta waxbarashada. Daraasado shisheeye ayaa xaqiijiyay in cabitaanka shaaha uu ka hortagi karo oo daweyn karo cudurrada neerfaha, gaar ahaan waallida waallida. Intaa waxaa dheer, kafeynku wuxuu kicin karaa habdhiska dhexe ee neerfayaasha, wuxuuna leeyahay saamaynta qaboojinta, fikirka, iyo nadiifinta wadnaha.
6. Hagaajinta cufnaanta lafaha
In kasta oo shaaha uu ku jiro kafeyn, kaas oo kor u qaadi kara luminta kalsiyum -ka kaadida, waxa ku jira ayaa aad u hooseeya. Xataa shaaha madow ee leh kafeyn aad u sarreeya waa 30 ilaa 45 mg halkii koob. Dhab ahaantii, shaaha waxaa ku jira walxo badan oo gacan ka geysanaya yareynta kaalsiyamka, oo ay ku jiraan fluorine, phytoestrogens iyo potassium. Daraasad laga sameeyay Taiwan ayaa lagu ogaaday in dadka inta badan cabba shaaha ay leeyihiin cufnaanta lafaha oo aad u yar iyo fursadda hoose ee jabka misigta.
Waxaa jira 7 nooc oo dad ah oo aan ku habboonayn cabitaanka shaaha
1. Dadka calool istaaga
Dadka calool -istaagga ah kuma haboona inay cabaan shaaha, maxaa yeelay mindhicirku waa qalalan yihiin inta calool -fadhiga ku jiro, sidaa darteed waxay ku habboon tahay in la cuno cuntooyinka qaar qoynaya xiidmaha, iyo maaddooyinka qaarkood ee shaaha ku jira waxay leeyihiin saameyn astringent gaar ah xuubka caloosha. Shaqada dheefshiidka iyo nuugista cuntada ayaa saxaro ka dhigta mid qallalan oo kuuskuusan, taasoo keenta calool -istaag ama ka sii dara.
2. Dadka qaba neurasthenia iyo hurdo la'aan
Sababtoo ah caffeine-ka shaaha ku jira ayaa leh saamayn xamaasad leh oo muuqata oo ku aaddan habdhiska dhexe ee neerfayaasha jidhka bini-aadamka, cabbitaanka shaaha, gaar ahaan cabidda shaaha xooggan, waxay maskaxda bani-aadamka ka dhigi doontaa xaalad aad u faraxsan oo aan nasasho lahayn.
3. Dhiig -yari
Sababtoo ah aashitada tannic ee shaaha ku jirta ayaa ka tagta birta cuntada si ay u samaysato roobab aan jidhku nuugin.
4. Dadka qaba kaalshiyam yaraanta ama lafaha jabay
Sababtoo ah alkaloids -ka shaaha ayaa hor istaagi kara nuugista kalsiyumka duodenum -ka. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale kor u qaadi kartaa soosaarka kalsiyum ee kaadida, taasoo jidhka ka dhigaysa kaalshiyam gudaha iyo dibedda ah, taasoo horseedaysa yaraanta kalsiyumka iyo osteoporosis, taasoo adkeyneysa ka soo kabashada jabka.
5. Dadka qaba boogaha caloosha
Sababtoo ah waxaa ku jira fosfodiesterase caloosha bini’aadamka oo xakameyn kara dheecaanka asiidhka gastric ee unugyada parietal, iyo theophylline ee shaaha waxay yareyn doontaa hawsha fosfodiesterase, taasoo keenta in unugyada parietal ay qariyaan xaddi badan oo asiidhka caloosha ah.
6. Bukaan -socodka
Sababtoo ah aashitada tannic ee ku jirta shaaha ayaa sii xumayn doonta xaaladda bukaanka, laguma talinayo in la cabo shaaha, lagumana talinayo in la cabbo shaah muddo dheer soo jiidanaysay.
7. Dadka qaba dhiig kar ama wadne xanuun
Caffeine-ka shaaha ku jira ayaa saameyn xooggan oo dhiirrigelinaya wadnaha ku leh jidhka bini'aadamka, hanaankan xiisaha lehna wuxuu saamayn ku yeelan doonaa dhaqdhaqaaqyada jir ahaaneed ee jirka wuxuuna hagaajin doonaa dheef-shiid kiimikaadka aasaasiga ah qaarkood.
Waa maxay ismaandhaafka shaaha la cabbo
1. Jeceshahay inaad cabto shaah cusub
Waqtiga kaydinta gaaban ee shaaha cusub awgeed, waxaa ku jira polyphenols badan oo aan oksaydh lahayn, aldehydes, aalkolo iyo walxo kale, kuwaas oo saamayn xoog leh ku yeelanaya xuubka caloosha iyo mindhicirka dadka waana u fududahay in la kiciyo cudurka caloosha. Sidaa darteed, waa inaad cabtaa shaah cusub oo cusub, iskana ilaali inaad cabto shaah cusub oo la kaydiyay wax ka yar nus bil.
2. cab shaaha oo dhan
Maadaama shaaha uu ku sumoobo sunta cayayaanka iyo walxo kale oo waxyeello leh inta lagu guda jiro beerista iyo farsameynta, waxaa had iyo jeer ku jiri doona dusha shaaha dushiisa qadar go'an. Sidaa darteed, marka ugu horreysa ee shaaha uu yeesho saameyn dhaqid, waa in la tuuraa.
3.ku cab shaah calool madhan
In shaah lagu cabbo calool madhan waxay mijin kartaa casiirka caloosha, waxay yareyn kartaa shaqada dheefshiidka, waxayna kordhin kartaa heerka nuugista biyaha, taasoo keenta in qaybo badan oo aan loo baahnayn oo shaaha ku jira ay galaan dhiigga, taasoo keenta dawakh, wadna garaac, tabar -dari gacmaha iyo cagaha iyo calaamadaha kale.
4. cab shaaha cuntada kadib
Shaaha waxaa ku jira waxyaabo badan oo tannic acid ah. Tannic acid waxay la falgeli kartaa cunnada birta ee cuntada si ay u soo saarto walxo cusub oo ay adag tahay in la kala diro. Waqti ka dib, waxay ku keeni kartaa yaraanta birta jirka bini'aadamka oo xitaa waxay keentaa dhiig -yaraan. Habka saxda ah waa: cab shaaha hal saac cuntada kadib.
5. qandho hayso oo shaah cab
Shaaha waxaa ku jira theophylline, oo leh saamaynta kor u qaadidda heerkulka jirka. Shaah u cabidda bukaannada qandhada leh waxay la mid tahay ku -shubidda dabka.
6. bukaanka boogtu waxay cabbaan shaah
Caffeine -ka shaaha ku jira wuxuu kor u qaadi karaa dheecaanka asiidhka caloosha, wuxuu kordhiyaa fiirsiga aashitada gastric, wuxuu dhaliyaa boogaha iyo xitaa daloolinta.
7.shaa cab xilliga caadada
Shaaha la cabbo xilliga caadada, gaar ahaan shaaha xooggan, wuxuu kicin karaa ama sii xumayn karaa cilladda caadada. Khubarada caafimaadku waxay ogaadeen in marka la barbardhigo kuwa aan cabin shaaha, halista kacsanaanta caadadu ay 2.4 jeer ka badan tahay kuwa caadaystay cabitaanka shaaha. Kuwa cabba wax ka badan 4 koob oo shaah ah maalintii waxay leeyihiin koror saddex laab ah.
Afarta xilli ee sannadka ayaa cimilada ka dhigaysa mid ka duwan, oo noocyada shaaha waa in la hagaajiyaa si waafaqsan. Waxaa lagu talinayaa in la cabo shaah udgoon guga. Shaaha udgoonku wuxuu kala firdhin karaa jeermisyada qabow ee ku urursan jirka xilliga jiilaalka wuxuuna kor u qaadaa koritaanka yang ee jirka aadanaha; xagaaga, shaaha cagaaran ayaa ku habboon cabbitaanka. Shaaha cagaaran wuxuu leeyahay dabeecad qadhaadh iyo qabow. Nabarada maqaarka, boogaha, caabuqyada, iwm; xilliga dayrta, shaah cagaaran ayaa lagula talinayaa, oo aan qabow iyo kulayl midna ahayn, taas oo gabi ahaanba baabi'in karta kulaylka haraaga ah ee jidhka, soo celin kara macaankii iyo diirimaadkii, dadkana qaboojin lahaa; cab shaah madow xilliga jiilaalka, kaas oo macaan oo diirran, hodan ku ah borotiinka, Leh shaqo nafaqo oo gaar ah.
Soo koobid: Maqaalkan, waxaan ognahay in cabbitaanka shaaha uu leeyahay saamayn badan, sida hagaajinta adkaysiga muruqa, iska caabinta shucaaca ultraviolet, ilaalinta qaabka jirka, iska caabinta shucaaca, hagaajinta xusuusta, hagaajinta cufnaanta lafaha, iwm, laakiin cabbitaanka shaaha kuma habboona qof walba , sida dadka calool istaaga Dadka qaba neurasthenia, hurdo la'aan, kaalshiyam yaraanta ama lafaha jaban, dhiig karka ama wadno -qabadku kuma habboona cabitaanka shaaha.
Waqtiga dhejinta: Sep-26-2021